N'elu ọgwụgwọ - OUZHAN ahia (SHANGHAI) CO., LTD
Nke mbụ, anyị kwesịrị ịma ihe kpatara ngwaahịa a ji chọọ ọgwụgwọ ala, gịnị bụ ọrụ ya, yana nsogbu ọ na - edozi.
Nke mbụ, usoro ọgwụgwọ dị elu nke na-eme ka ọkpụkpụ na-eme ka ihe dị n'elu ala nke ihe dị iche na nke igwe, nke anụ ahụ na nke kemịkal nke mkpụrụ. Ebumnuche nke ọgwụgwọ elu bụ iji nweta nguzogide corrosion nke ngwaahịa ahụ, na-eyi nkwụsị, ịchọ mma ma ọ bụ ọrụ ọrụ ndị ọzọ pụrụ iche.
Ọtụtụ ndị ahịa ga-ajụ anyị ihe kpatara anyị ji chọọ ọgwụgwọ elu, gịnị bụ ọrụ ya, kedụ ihe kpatara eji etinye usoro a?
Ouzhan oru mkpara:Ọgwụgwọ ihu bụ iwepụ ụdị okwu mba ọzọ niile (dịka mmanụ, nchara, ájá, ihe nkiri agba agba, wdg) jikọtara ya na ihe ahụ, ma nye ezigbo mkpụrụ kwesịrị ekwesị maka ihe mkpuchi chọrọ iji hụ na ihe nkiri mkpuchi nwere ezigbo ihe nchebe. Arụrụ arụ, arụ ọrụ ịchọ mma na ụfọdụ ọrụ pụrụ iche, a ga-emegharị ihe ahụ tupu eserese. A na-akpọkọta ọrụ a na-arụ ụdị ọgwụgwọ a dịka ọgwụgwọ tupu oge eserese (elu) ma ọ bụ nkwupụta (elu).
Ọgwụgwọ dị elu na-eme ka ngwa ngwa na nkwụsị abrasion nke ngwaahịa ahụ dịkwuo elu. Na ntọala mbụ, ọ na-abawanye oge iji wee chekwaa oge dị ukwuu, ụgwọ na ego.
Usoro a na - eji mmeghe electrode iji mepụta mkpuchi n’elu ebe ọrụ ahụ. Methodszọ ndị bụ isi bụ:
(1) Ntinye aka
Na electrolyte ngwọta, workpiece bụ cathode. A na-akpọ usoro imepụta mkpuchi n'elu n'elu n'okpuru ọrụ nke mpụga mpụga electroplating. Ihe nkpuchi nwere ike ịbụ ihe nchara, alloy, semiconductor ma ọ bụ nwere ihe siri ike dị iche iche, dịka ihe mkpuchi ọla kọpa na ihe nickel.
Na electrolyte ngwọta, workpiece bụ anode. A na - akpọ usoro nke ihe nkiri oxide n’elu n’elu ọrụ nke mpụga anodization, dịka anodization nke alloy alloy.
Enwere ike iji ọgwụ ma ọ bụ electrochemical mee ọgwụgwọ ọgwụgwọ nke ígwè. Usoro kemịkalụ bụ itinye ihe ndozi n'ime ihe na-ekpo ọkụ, ma dabere na ọrụ kemịkalụ iji mepụta ihe nkiri oxide n'elu ebe ọrụ ahụ, dị ka nchara nchara.
Usoro a enweghị ihe ọ bụla dị ugbu a, ma jiri mmekọrịta nke ihe ndị mejupụtara mejupụta mkpuchi n’elu ebe ọrụ ahụ. Methodszọ ndị bụ isi bụ:
(1) Ọgwụ mgbanwe akpụkpọ ahụ nke kemịkal
Na ngwangwa nke electrolyte, ihe eji eme igwe anaghị arụ ọrụ ugbu a, ihe kemịkalụ na ihe ngwọta ahụ na-arụkọ ọrụ na mpempe akwụkwọ iji mepụta mkpuchi n'elu ya, nke a na-akpọ ọgwụgwọ ihe nkiri kemịkal. Dị ka bluing, phosphating, passivation, na chromium nnu ọgwụgwọ nke metal na-ebupụta.
Na ngwọta nke electrolyte, a na-edozi elu nke ihe a na-eme ka ọ bụrụ nke na-enweghị mmetụta nke ugbu a. Na azịza ya, n'ihi Mbelata ihe ndị dị na mmiri, usoro ịdebe ihe ụfọdụ n'elu ihe ọrụ ahụ iji mepụta mkpuchi a na-akpọ plating electroless, dị ka nickel na-enweghị electroless, Electroless copper plating, wdg.
Ejiri okpukpu okpomọkụ
Usoro a bụ iji gbazee ma ọ bụ gbasaa ihe ahụ n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ dị elu iji mepụta mkpuchi n'elu ebe ọrụ ahụ. Methodszọ ndị bụ isi bụ:
(1) Hot itinye plating
A na-akpọ ihe eji etinye ihe eji arụ ọrụ n'ime igwe a wụrụ awụ ka ọ bụrụ ihe mkpuchi n'elu ya dị ka ihe ọkụ ọkụ dị ọkụ, dị ka galvanizing na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ.
(2) Ihe na-agba ọkụ na-agba ahụ ọkụ
A na-akpọ usoro nke atomizing ọla a wụrụ awụ ma fesa ya n’elu ebe ọrụ ahụ ka ọ were kpuchie ihe ịgba ya n’ọkụ, dị ka zinc na-agbazi ya zọọlfụ na aluminom n’ichekwa ya.
(3) ampkọcha ọkụ
Usoro kpo oku na ịpị mpempe igwe ahụ iji kpuchie elu nke workpiece ahụ iji mepụta akwa mkpuchi a na-akpọ stampụ ọkụ, dị ka stampụ ọkụ na-ekpo ọkụ nke aluminom.
(4) Ọgwụ mgbochi kemịkal
Usoro nke ihe eji aru oru ya na ihe ndi metutara ya na ihe di oku, ma ihe ozo abanye n'ime ihe a na aru oku di oku ka anakpo ogwu oku, dika nitriding na carburizing.
(5) Igwu mmiri
Site ịgbado ọkụ, a na-akpọ usoro nke ịtọba igwe echekwara n'elu ebe ọrụ ahụ iji mepụta akwa akwa ịgbado ọkụ, dịka ịgbado ọkụ na-arụ ọrụ na alloys na-eguzogide ọgwụ.
Usoro a bu ihe eji eme ihe ma obu ionized ma tinye ya na elu nke ihe eji eme ihe n'okpuru akwa nke oma iji mejuputa nkpuchi. Methodzọ bụ isi bụ.
(1) Nkọwa nke anụ ahụ (PVD)
N'okpuru ọnọdụ agụụ, usoro nke ịmịkọrọ ọla n'ime atọm ma ọ bụ ụmụ irighiri ihe, ma ọ bụ itinye ha n'ime ion, ka a na-etinye ozugbo na mpempe akwụkwọ ahụ iji mepụta mkpuchi, nke a na-akpọ ntinye anụ ahụ. The edebe urughuru doo si na-abụghị chemical ihe, dị ka evaporation Sputtering plating, ion plating, wdg
(2) Ion ịkụbanye
Usoro nke ịkụnye ion dị iche iche n'ime elu nke workpiece n'okpuru nnukwu voltaji iji gbanwee elu a na-akpọ ion lantbanye, dị ka ogwu boron.
(3) Nkọwa Ugbo Ala (CVD)
N'okpuru nrụgide dị ala (mgbe ụfọdụ mgbali nkịtị), usoro nke ihe ndị na-emepụta gas na-etolite ihe mkpuchi siri ike n'elu ebe a na-arụ ọrụ site na mmeghachi omume kemịkal, a na-akpọ kemịkalụ vapo kemịkalụ, dị ka ntinye vapo nke silicon oxide na silicon nitride.
OTHERzọ ndị ọzọ nke ịgbakọ
Tumadi n'ibu, chemical, electrochemical, na usoro anụ ahụ. Methodszọ ndị bụ isi bụ:
Sprayzọ na-agba agba ma ọ bụ nchapu bụ ọrụ nke itinye agba (organic ma ọ bụ inorganic) n'elu ebe ọrụ ahụ iji mepụta mkpuchi, nke a na-akpọ eserese, dị ka eserese, eserese, wdg.
A na-akpọ usoro nke ikpuchi ihe mkpuchi na mpempe akwụkwọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-emetụta mmetụta mmetụta, dị ka galvanizing mmetụta.
Ọgwụgwọ laser elu
Usoro nke irradiating elu nke workpiece na laser ịgbanwe ya Ọkpụkpọ a na-akpọ laser n'elu ọgwụgwọ, dị ka laser quenching na laser Remelting.
A na-akpọ teknụzụ nke ịkwadebe ihe nkiri siri ike n'elu ihe osise site na usoro anụ ahụ ma ọ bụ nke kemịkalụ. Dị ka ihe nkiri diamond, ihe nkiri cubic boron nitride na na.
ELECTROPHORESIS NA ELECTROSTATIC PRBỌCH.
1. Nhọrọ Electrophoresis
Dị ka ihe electrode, na workpiece-etinye n'ime conductive mmiri soluble ma ọ bụ mmiri-emulsified agba, na Nleta a circuit na ndị ọzọ electrode na agba. N'okpuru ọrụ nke mpaghara eletriki, ihe nkedo mkpuchi ahụ abanyela n'ime ion resin ebubo, cations na-agagharị na cathode, na anions na-aga anode. A na-etinye ion resin ndị a ebubo, yana ụmụ irighiri ihe ndị na-agba agba, na-ahọpụta electrophoresed n'elu ebe a na-arụ ọrụ iji mepụta mkpuchi. A na-akpọ usoro a electrophoresis.
N'okpuru ọrụ nke ọkụ eletrik DC dị elu, a na-eduzi mpempe agba agba agba agba na-efe efe na-arụ ọrụ nke ọma iji nweta ihe nkiri eserese, nke a na-akpọ spraying static.